Home » Fitsangatsanganana azo idirana » Fiainana toy ny lanezy any Hawaii
Ao amin'ny tanibe, rehefa mahita ny alokalony ny groundhog, dia misy enina herinandro fanampiny amin'ny ririnina. Any Hawaii, rehefa mahita ny alokalony ilay flamingo dia misy paradisa enina herinandro fanampiny - indrindra ho antsika snowbirds izay monina eto manomboka ny Noely ka hatramin'ny Paska. Naharitra 39 ny fitsidihana an'i Hawaii mba hahitana ny toerana mety hipetrahana amin'ny fizahan-tany fizaran-tany. Nizaha ireo nosy lehibe rehetra izahay talohan'ny nanapahan-kevitra an'i Oahu fa safidy mety. Na dia tiako be aza ny tropika, dia tsy afaka mahafoy ireo vatosoa ara-kolontsaina toa ny teatra, opéra, symphony, kanto tsara ary kabary ara-tantara aho. Tany am-piandohana dia nibanjina an'i Naalehu (any amin'ny Nosy Lehibe) aho, toerana nambolen'i Mark Twain hazo monkeypod teo akaikin'ny tendrony atsimo indrindra tany Etazonia. Mampalahelo fa voan'ny tsiranoka amin'ny hozatra aho, ary i Naalehu dia lavitra loatra an'ireo manam-pahaizana manokana momba ny MD.
Oahu dia manana Hopitaly Queen, izay omen'ny neurologia voamarina amin'ny birao serivisy ho an'ny olona sembana toa ahy. Tamin'ny voalohany dia nibanjina ny tanànan'i Laie aho satria te hipetraka akaikin'ny Mormons. Mahatsiaro ho voaro miaraka amin'izy ireo aho, azo inoana fa noho ny fandraràn'izy ireo hangalatra, hisotro toaka, tsy hanam-pahaizana ary ireo karazan-dratsy rehetra. Tsy misy mahita mpangaroharo divay manelingelina ny fandriam-pahalemana, na ireo mpidoroka zava-mahadomelina maty tany amin'ny boalobony. Na dia tsy Môrmôna aza aho dia mifandray tsara amin'izy ireo, toy ny nataoko fony aho nipetraka tany amin'ny faritanin'i Amish any avaratr'i Indiana.
Tiako ny Ivotoerana kolontsaina polineziana ao Laie. Ny mari-pahaizana diplaoma momba ny mari-pahaizana dia amin'ny antropolojika ara-kolontsaina, ary ny fitsidihana ny Center dia toy ny zaza ao amin'ny magazay vatomamy. Hipetraka any aho raha afaka, mifangaro amin'ireo mpandika volo, mankalaza ireo kolontsaina manankarena ao Polinezia. Saingy indray, ny tanànan'i Laie dia lavitra loatra ny toerana misy ny efitrano fandraisam-bahiny mandroso.
Vakio ny lahatsoratra feno eto.